बिश्वको सब भन्दा महङ्गो ३ ठाँउहरु हेर्नुस तपाईं चकित हुनुहुन्छ,फोटो हेर्दै दङ्ग पर्ने | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य बिश्वको सब भन्दा महङ्गो ३ ठाँउहरु हेर्नुस तपाईं चकित हुनुहुन्छ,फोटो हेर्दै दङ्ग...
जब यो यात्राको कुरा आउँछ, तपाईं एक आरामदायी बस्न, उत्कृष्ट खाना, साहसिक गतिविधिहरू, र तपाईंको बजेटमा सबै प्रसिद्ध ठाउँहरू अन्वेषण गर्न चाहनुहुन्छ। धेरै जसो होटलहरू, उडानहरू, र रेष्टुरेन्टहरूमा उत्तम सम्झौताहरू प्राप्त गर्न कोशिस गर्दछन् ताकि तपाईं बजेटबाट टाढा नहुनुहोस्। कुन शहरहरु को लागी तपाई को लागी यात्रा को लागी अधिक खर्च लाग्छ जान्न उत्सुक? हामीले तल संसारमा शीर्ष ३ महँगो छुट्टी गन्तव्यहरू सूचीबद्ध गरेका छौं।
पर्यटकहरूले भ्रमण गर्न सिंगापुर शहर विश्वको सब भन्दा महँगो शहर हो। यातायात को लागी यस महँगो शहर मा पैसा को थुप्रो लागत। यदि तपाईं कार किन्न र प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यसको लागि ठूलो बचत हुनु पर्छ। सिंगापुरको सरकारले कारको उच्च दर सडकमा कुल कारहरू ब्यबश्थित राख्नको लागि राख्छ। यस बाहेक, लुगा र किरानेसाना पनि दरमा उच्च छन्। यो फुज फूड संस्कृतिको साथ सबैभन्दा विकसित शहर हो। यो प्राय: हनीमून जोडीहरू, पेशेवरहरू, र ठूलो धन सम्पत्ति भएका मानिसहरूले भ्रमण गर्दछन्।
तपाई फ्रान्सको प्रसिद्ध शहर पेरिसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न जुन हरेक वर्ष धेरै संख्यामा पर्यटकलाई स्वागत गर्दछ। पेरिसलाई “रोमान्सको शहर” को रूपमा पनि चिनिन्छ र प्रेमी-डोवे जोडीहरूमाझ प्रख्यात छ। यो पर्यटकहरु द्वारा भ्रमण गर्न सबैभन्दा महँगो छुट्टी गन्तव्य हो। व्यक्तिहरू केवल यसको विचित्र क्याफेहरू, चकलेटहरू, वाइन, पेस्ट्रीहरू र राती राम्री एफिल टावर पत्ता लगाउन मन पराउँछन्। यो नयाँ विवाहित जोडीहरू भ्रमण गर्न उत्तम, तर महँगो सहर हो। शहरको शाही किल्लाहरू, भव्य क्याथेड्रलहरू, र प्रभावशाली वास्तुकलाले यसलाई विश्वभरि पर्यटकहरूको लागि उचित लायक बनाउँदछ।
हंगकंग बस्नका लागि विश्वको सब भन्दा महँगो शहर हो। यद्यपि तपाईं अझै खानपान, बाहिरी गतिविधिहरू र शहरको परिदृश्य अन्वेषणको लागि सस्तो विकल्पहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईं कमभटको लागि सार्वजनिक यातायात रोज्न सक्नुहुन्छ र राम्रोको लागि खुल्ला बजारहरू। यस बाहेक, तपाईं छुट्टीमा नि: शुल्क पैदल यात्रा, समुद्र तटहरू, र हिमालहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। लागतहरू उफ्रिन्छ जब तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय खाना खान चाहनुहुन्छ, लक्जरी होटेलमा बस्नुहोस्, र फेन्सी पेयहरूको माग गर्नुहोस्।
Previous articleसेयर बजार छिर्दै हुनुहुन्छ ? पहिले यी कुरा जान्नुहोस् नत्र चाल पाउनुहोला
Next articleअसारबाट निषेधाज्ञा हट्नसक्ने हेर्नुहोस कुन कुन जिल्लामा यातायात खुल्ने संभावना छ
काठमाडौंमा निषेधाज्ञा एक साता थप्ने तयारी, थप क्षेत्र खुलाउनेबारे हेर्नुस के के भनिएको छ
कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एकसाता थप्ने तयारी भएको छ । आइतबार बेलुका बस्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको...
के सुनैसुनले बनेको घर हुन्छन् त ? तपाईंले कहिलै देख्नु भको छ, जन्नुहोस र...
सुन एक महान धातु हो जसको मतलब यसको क्षय, अक्सीकरण र एसिड प्रतिरोधी हो। यो परीक्षण गर्नको लागि, कालो पत्थरमा तपाईको सुनलाई घोट्नुहोस र...